Hijabs sy zipo-fohy: tsy azo hanaovana ao Tajikistan · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraThe Echo of Central Asia
Voadika ny 16 Mey 2018 4:34 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, Ελληνικά, Español, English
Ismoil Somoni, mpanorina ny ampira miteny amin'ny Persiana voalohany taorian'ny fahazoan'i Arabo ny tontolo Persiana. Ao afovoan'ny famantarana Tajik vaovao ankehitriny ny mpanjaka Somoni. Miorina ao afovoan-tanànan'i Dushanbe, renivohitr'i Tajikistan ny tsangambatony. Sary avy amin'i Kalpak Travel, cc-by-2.0
Misy ireo orinasa mitaky amin'ny mpiasa mba hanao akanjo fanamiana miavaka. Misy ireo sekoly izay tsy maintsy hajaina ny karazana fanamiana. Misy ireo hetsika izay ahitana fanamarihana ao amin'ny fanasana, milaza ny karazana akanjo tokony hanaovan'ny asaina. Ary misy ny firenena izay miezaka mametraka fomba fiakanjo ho an'ny vehivavy, mandidy izay tokony hanaovany any an-trano hatramin'ny firavaka tokony hoentin'izy ireo eny amin'ny hetsika ho an'ny besinimaro, fampisehoana, tranom-panjakana, na eny an-dàlana fotsiny. Ny firenena izay manao ny fitafiana ho resaka ara-poto-kevitra dia i Tajikistan, ampahany kely amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha miorina eo akaikin'i Afghanistan sy i Shina.
Mihevera tahaka ny Tajik
Izay Tajikistan ankehitriny dia anisan'ny Ampira Bukhara hatry ny ela, iray amin'ireo fanjakana tratra aoriana tamin'ny fivelarana tamin'ny vanim-potoana antenantenany. Mpanoa ny Ampira Rosiana izy io mandra-pampidiran'ny Bolshevika azy ho ao anatin'ny Firaisana Sovietika ary niezaka nanafoana ny fivavahana sy ny maha-olom-pirenena tamin'ny anaran'ny fananganana olom-pirenena vaovao Sovietika. Taorian'ny nianjeran'ny Firaisana Sovietika, nipoaka tao anaty ady an-trano ny firenena vao teraka, ka nifanditra mba hitaky ny sezam-boninahitra ny foto-kevitra (ideolojika) roa, ny Komonisma sy ny Islamisma.
Ireo izay nanohitra ny Islamista no nandresy, ary avy eo niezaka nanangana ny maha-olom-pirenena vaovao. Mitolona hitady izay iray mahamendrika, niezaka nametraka endrika mari-panondroana isankarazany ny repoblika tao anatin'ny roapolo taona monja. Isan-karazany manomboka amin'ny fitakiana ny lovan'ny Aryana izany ka hatramin'ny fiezahana ho mpitarika amin'ny fitomboan-dazan'ny Islam. Tsy misy sahaza ny politikam-panjakana, ary amin'izao fotoana izao, manaraka ny dian'ireo mpifanolo-bodirindrina Aziatika Afovoany Sovietika teo aloha ity firenena ahitana mponina valo tapitrisa ity amin'ny fananganana mari-panondroana Tajik maoderina sy nasionalista izay tsy ahitana endrika ivelany amin'ny Islam – anisan'izany ny hijab sy ny volombava – ao amin'ny firenena izay milaza fa Miozolomana ny olona maherin'ny sivy amin'ny folo.
Mitafy tahaka ny Tajik
Efa ela no olana ara-poto-kevitra ambony ho an'ny governemanta ny fitsipika fiakanjo ho an'ny vehivavy. Manomboka amin'ny fandraràna ny mpianatra tsy hanao hijab any an-tsekoly, nanjary lasa “tolo-kevitra” mahery vaika manohitra ny fanaovana hijab na aiza na aiza izany, anisan'izany ny ao an-trano. Nampifandraisin'ny governemanta Tajik amin'ny mahery fihetsika sy ny fampihorohoroana ny niqab mainty “Arabo”, izay mandrakotra ny vatan'ny vehivavy manontolo afa-tsy ny maso, sy ny endrika hijab “Tiorka” maoderina malaza ankehitriny manerana ny tontolo Miozolomana ary heverina ho fandrahonana ny fanjakana sy ny fiarahamonina. Araka ny filazan'ny filoha Tajik Emomali Rakhmon, niresaka momba izay tokony hotafian'ny vehivavy ao amin'ny fireneny:
Aza miankohoka amin'ny soatoavina vahiny, aza manaraka kolontsaina vahiny! Mitafia akanjo amin'ny loko sy fihety nentim-paharazana, fa tsy akanjo mainty, satria na dia ny fitafiana fisaonan'ny vehivavy Tajika aza dia fotsy, fa tsy mainty.
Manery ny fanjakana hihetsika ny fitomboan'ny isan'ireo vehivavy manao hijab sy ny lehilahy be volombava—zavatra tsy fahitan'ireo Tajik monina an-tanandehibe sy ireo sangany ampolony taona maro nandritra ny fitondrana Sovietika—miara-mitombo amin'ny fanahiringiriny ny Silamo manerana izao tontolo izao. Nitarina hatreny amin'ny seha-bahoaka ny fandraràna ny Hijab sy ny volombava, ary raha nahitàna fanakianana ny “fanafihan'ny governemanta ny soatoavin'ny islamista” izany, dia nitarin'ny fanjakana ny fandraràna ny “akanjo Eoropeana” ary nampiany zipo-fohy sy akanjo mampiseho tratra tamin'ny lisitra. Nivandravandra ny vehivavy Tajika – ka inona no tokony hotafiana raha izany?
Fampisehoana lamaody tamin'ny santionan'ny “fitafiana nasionaly” nalefan'ny fahitalavi-panjakana
Tamin'ny fiandohan'ny lohataona 2018, namoaka torolàlana momba ny fanamiana izay mampianatra ny vehivavy Tajik mikasika ny “etika fiakanjoana” amin'ny fanambadiana, fetim-pirenena, any am-piasàna, ny herinandro sy ny faran'ny herinandro, any an-trano, sns ny Minisiteran'ny Kolontsaina Tajik, miaraka amin'ny Komity ho an'ny Vehivavy sy ny Raharaha ara-pianakaviana. Ny torolàlana, “Toro-hevitra momba ny fiakanjoana ho an'ny vehivavy ao Tadjikistan”, dia azo vidiana amin'ny vidiny 10 dolara. Santionany amin'ireo akanjom-behivavy amin'ny andavanandro ny fitafiana nentim-paharazana izay vita indrindra amin'ny ikat. Jereo ny santionany etsy ambany:
Fitafiam-pirenena maoderina Tajik atoro-hevitra amin'ny fomba ofisialy mba hanaovan'ny ankizy 7-14 taona. (Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Komity momba ny vehivavy sy ny raharaham-pianakaviana ao Tajikistan)
Fitafiana nasionaly Tajik maoderina asaina amin'ny fomba ofisialy mba hanaovan'ny tovovavy 14-17 taona. (Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Komity momba ny vehivavy sy ny raharaham-pianakaviana ao Tajikistan)
Fitafiana nasionaly Tajik maoderina asaina amin'ny fomba ofisialy mba hanaovan'ny vehivavy 18-30taona. (Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Komity momba ny vehivavy sy ny raharaham-pianakaviana ao Tajikistan)
Fitafiana ofisialy sy laika asaina amin'ny fomba ofisialy mba hanaovan'ny vehivavy 18-30 taona. (Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Komity momba ny vehivavy sy ny raharaham-pianakaviana ao Tajikistan)
Fitafiana nasionaly Tajik natokana amin'ny fomba ofisialy mba hanaovan'ny vehivavy 30-40 taona. (Sary avy amin'ny tranonkala ofisialin'ny Komity momba ny vehivavy sy ny raharaham-pianakaviana ao Tajikistan)
Miahiahy momba ny voambolana “torolalana” ny Tajik, izay vao tsy sambany no niaina “torolalana” teren'ny fanjakana atao eo amin'ny sehatra tsy miankina.
Tononina toy ny hoe “voarara” ve ny voambolana “tsy andrisihana” ankehitriny?
Ny tari-dalana, ankoatra ny fanoloran-kevitra mikasika izay hotafian'ny vehivavy dia ahitana ny lisitr'ireo izay tsy tokony hotafiana, ao anatin'izany ny “hijab, ny akanjo mainty, ny fehi-tenda mainty, ny akanjo Eoropeana mihanjahanja, ny zipo fohy, ny mampiseho tratra, ny akanjo manify mampiseho vatana, ny akanjo syntetika, sns. Na dia miteny aza ny manampahefana fa ny tanjon'izy ireo dia ny fampiroboroboana ny kolontsaina ara-tantara amin'ny fitafiana, nahita ny lehilahy sasany liam-paharazana fa ahitana izay antsoin'izy ireo hoe “santionan'ny fitondran-tena maloto” ilay boky
Ny jean tery tokoa ve no ara-dalàna? Aiza ny fitondran-tena madio? Silamo avokoa isika rehetra ary mirehareha amin'izany (maha silamo) fatratra. Mahatonga antsika ho matanjaka ny toen-tsaintsika ary hajaina noho izany isika. Manoro-hevitra ny vehivavy izy ireo mba hanao zipo any am-piasana. Tsy Eoropeana isika ary tsy tokony hanaisotra ny vehivavy.
Ao anatiny koa ny lehilahy
Fanampin'izany, naha-tezitra ny vehivavy eo anivon'ny fiarahamonina ilay boky, nanontany ny tsy fisian'ny toro-hevitra mitovy ho an'ny lehilahy izy ireo ary mangataka an'izany. Naneho hevitra momba izany ny mpisera iray tao amin'ny news.tj:
Tena misy ny tsy fitoviana eo amin'ny lahy sy ny vavy! Ankehitriny, mila mamoaka torolàlana momba ny fomba fiakanjon'ny mponina lehilahy isika! Mety ho mampihomehy izany! Mahamenatra ho an'ny Ministeran'ny Kolotsaina ny miditra amin'ny fampiakanjoana ny mponina vehivavy! Tsara kokoa raha manao ny adidin'izy ireo mivantana izy ireo
Taorian'ny valin-tenim-bahoaka, nanambara ny Minisiteran'ny Kolotsaina fa hamoaka boky mitokana manoro-hevitra mikasika ny fomba fitafiana ho an'ny lehilahy izy ireo.
Na dia firenena demokratika araka ny lalàmpanorenana aza i Tajikistan ary mankatoa ny fahalalahana manerantany maoderina mikasika ny fiainana manokana, mijoro mifanohitra amin'ny zo ara-dalàm-panorenana ny fanapahan-kevitra sy ny politikan'ny governemanta, ary tsy nahomby ny ezaka fiarovana ny zo ara-dalàmpanorenena manokana tamin'ny alalan'ny fitsarana.